Memorial University of Newfoundland (Mun) - Study na Canada
bara uru ọmụma
Study na Ukraine
Study na Russia
Memorial University of Newfoundland Nkọwa
City : St. Jọn
acronym : Mun
tọrọ ntọala : 1925
Students (ihe ruru.) : 19000
Echefukwala atụle Memorial University of Newfoundland
Idebanye aha na Memorial University of Newfoundland
Dị ka Newfoundland na Labrador nanị mahadum, Memorial nwere a pụrụ iche ọrụ ndị a ógbè. Guzosie Ike dị ka a ncheta ruo Newfoundlanders ndị tụfuru ndụ ha na-arụsi ọrụ ike ọrụ n'oge mbụ na nke abụọ World Wars, Memorial University adọrọ n'ike mmụọ nsọ si ndị a gbajaa àjà nke gara aga dị ka anyị na-enyere iwu a ka mma n'ọdịnihu n'ihi na anyị na ógbè, mba anyị na anyị na ụwa.
Anyị bụ ndị a multi-campus, multi-inye, ọha, ozizi / research mahadum mbọ iji mma n'ihe niile anyị na. Anyị na-agbalịsi nwere mba na zuru ụwa ọnụ mmetụta, mgbe emezu anyị na-elekọta mmadụ iwu inye ohere agụmakwụkwọ mahadum maka ndị nke ógbè na-eme ka mmadụ, omenala, na nkà mmụta sayensị na ọganihu akụ na ụba Newfoundland na Labrador na karịrị.
Memorial nwere ihe karịrị 18,500 ụmụ akwụkwọ gbasaa gafee anọ campuses na ihe fọrọ nke nta 85,000 Alumni nọ n'ọrụ n'ụwa nile. Si obodo na-agbalịsi ike nyocha oru ngo nke mba nchegbu, Memorial Chineke mmetụta a na-eche n'ebe nile.
Memorial University ga-abụ otu n'ime ihe ndị kasị na-akwanyere ùgwù ọha mahadum dị na Canada na karịrị, ọ ga-emezukwa ya pụrụ iche iwu ji ndị Newfoundland na Labrador.
Memorial University bụ otu ihe yana idobe okirikiri obodo raara nye ọhụrụ na mma na nkuzi na mmụta, research, mfọn, kere ihe, ọrụ na ọha na eze njikọ aka.
Memorial anabata ma na-akwado ụmụ akwụkwọ na ndị ọkà mmụta si n'ụwa nile ma na-eme ihe ọmụma na nka na mpaghara, mba na mba.
Ọkasị: Na-agba ume ma na-akwalite izu oke site ọhụrụ na creativity, rigor na pragmatism.
eguzosi ike n'ezi: Ime ihe n'eziokwu na usoro ziri ezi n'ihe nile interactions, ịnọgide na-enwe ndị kasị elu ụkpụrụ na ozizi, research, ọha aka na ọrụ.
Collegiality: -Ekere òkè ndị ọzọ ùgwù, openness na ntụkwasị obi n'ebe ịchụso otu nzube, enwe emi maka ndị mmadụ n'otu n'otu, ideals na alụmdi ka a dum.
Inclusiveness di iche-iche: Inabata na ime ya eme ọrụ na-ekwe nkwa di iche iche na hara nhatanha.
Responsiveness: Ịnabata ndị mmadụ n'otu n'otu nakwa obodo.
ngosipụta: N'ịnakwere ibu ọrụ maka nweta nke nkịtị mgbaru ọsọ na nzube.
Freedom na Discovery: -Akwado nnwere onwe na-achụso ihe ọmụma na dabeere n'otu n'otu nakwa n'ozuzu ọgụgụ isi, ọchịchọ ịmata, nka na creativity.
ude: -ekweta, ahụ anya,, akụkụ nile nke mahadum enterprise gụnyere ozizi na mmụta, research, mfọn, kere ihe na ọha na eze njikọ aka.
Ibu ọrụ ebe: Valuing na n'imezu ihe ndị pụrụ iche iwu ji ndị Newfoundland na Labrador site n'ịkwado na ụlọ ikike ihe nke ọma na:
agwa mkpa na ohere Newfoundland na Labrador;
eme mahadum obodo ihe anya nke mba na mba pụtara;
na-arụpụta na-anapụta agụmakwụkwọ mmemme nke mba na mba caliber; na,
nke na-ahụ ike ohere okwu site a multi-campus alụmdi.
Ibu ọrụ ndị na-amụ: N'ịghọta ụmụ akwụkwọ dị ka a mbụ kacha mkpa na-enye ihe gburugburu ebe obibi ma na-akwado iji hụ na ha agụmakwụkwọ na onye ihe ịga nke ọma.
interdisciplinary mmekota: -Akwado overarching themes niile nchụso na nọchiiri agụmakwụkwọ nkeji na adreesị ịrịba ohere na ihe ịma aka nke Memorial na-karịsịa ọma positioned iwu mba na mba dị ike.
nkwado: -Akpa àgwà otú ahụ bụ environmentally, akụ na ụba na mmadụ adigide na ochichi, agụmakwụkwọ na nnyocha mmemme.
Memorial University nwere anọ campuses, onye ọ bụla na ya flavor na amara. The n'ógbè bụ isi obodo, St. Jọn, ebe ihe dị ka ndị St. Jọn campus nke awade a nso nke agụmakwụkwọ na programmụ a nke oge a, obodo mepere emepe ntọala. -Emi odude ke St. Jọn bụ theMarine Institute, Canada si eduga center nke oku azu na mmiri ọzụzụ na otu n'ime ndị kasị ibu mmiri na-enye ọzụzụ na ụwa. Grenfell Campus, emi odude ke Nkuku Brook on sinik ọdịda anyanwụ nke agwaetiti, na a na-emesapụ aka nkà na sayensị campus bụ ọkachamara gburugburu ebe obibi na ezi nkà mmemme.
Memorial nkuzi na mmụta ohere ịgbatị gabiga n'ógbè Newfoundland na Labrador. Na United Alaeze, na Harlow Campus, dị n'ebe quaint obodo nke Old Harlow, Essex, bụ a pụrụ iche lee anya n'ihe ndị e si na-amụ, research, na ịchọpụta na European Union.
Ọzọkwa, Memorial University si 450 anya agụmakwụkwọ ọmụmụ eme ka o kwe iru gị klas wezụga ala, kwe gị ịrụ agụmakwụkwọ ngagharị n'ebe ọ bụla n'ụwa.
Schools / Colleges / Departments / ọmụmụ / ikike iche
Bachelor nke nchịkwa azụmahịa
Bachelor nke azụmahịa (ngalaba-op)
International okokporo nke nchịkwa azụmahịa
Joint okokporo ma ọ bụ nkà na okokporo nke azụmahịa (ngalaba-op)
Bachelor agụmakwụkwọ (isi / mbụ) dị ka a akpa ntaifiọk
Bachelor agụmakwụkwọ (isi / mbụ) dị ka a abụọ ogo
Bachelor agụmakwụkwọ (n'etiti / abụọ)
Bachelor agụmakwụkwọ (n'etiti / abụọ) conjoint na ubre technology agụmakwụkwọ
Bachelor nke music conjoint na okokporo nke music agụmakwụkwọ
Bachelor nke music agụmakwụkwọ (dị ka a abụọ ogo)
Bachelor nke pụrụ iche agụmakwụkwọ
Bachelor nke injinịa
Human Kinetics na Recreation
Bachelor nke kinesiology (ngalaba-op dị)
Bachelor nke ntụrụndụ (ngalaba-op dị)
Bachelor nke mmụta mmega ahụ (ngalaba-op dị)
Humanities na Social Sciences
Bachelor nke nkà
Joint okokporo nke nkà na okokporo nke azụmahịa (ngalaba-op)
Dọkịta nke Medicine
Bachelor nke music
Bachelor nke nọọsụ
Bachelọ nke sayensị (ahịa ọgwụ)
Bachelọ nke sayensị
Bachelor nke-elekọta ọrụ
Memorial University of Newfoundland bụ a na-abụghị denominational mahadum na St Jọn, Newfoundland. Memorial University malitere dị ka Memorial University College (MUC), nke meghere ke September 1925 na a campus na Na Na Na Street na St. Jọn.
Onyeisi oche mbụ bụ J. L. Paton. Ọ nyere afọ abụọ mbụ nke mahadum ọmụmụ. MUC mbụ aha bụ 57 ụmụ akwụkwọ, ebili ka a ọnụ ọgụgụ kasị elu nke n'elu 400 na 1940s. na 1933 ya jikọrọ ya n'akụkụ Nkịtị School were ọrụ maka nkụzi ọzụzụ. N'oge College n'oge afọ ya natara bukwanu nkwado si Carnegie Corporation of New York.
The mahadum e guzobere dị ka a ncheta ruo Newfoundlanders onye tụfuru ndụ ha na-arụsi ọrụ ike ọrụ n'oge Agha Ụwa Mbụ. Ọ na-e mesịrị raraghachi na-na-ahụ ruru ógbè agha nwụrụ anwụ nke Agha Ụwa nke Abụọ. Alan Beddoe mere mkpuchi nke ogwe aka maka Ncheta Ọnwụ Jizọs University of Newfoundland. The post-Confederation ọchịchị elu ọnọdụ nke Memorial University College na full mahadum ọnọdụ na August 1949, renaming alụmdi na Memorial University of Newfoundland. Memorial University guzobere Ememe Ncheta ahụ University Act.
The aha na Mun afọ mbụ bụ 307 ụmụ akwụkwọ. na 1961, aha ọ mụbara 1400, Mun kpaliri site Na Street ya ebe ịnọ ugbu a na Elizabeth Avenue (Main Campus).
on 8 March 1965, ndị ọchịchị nke Newfoundland mara ọkwa free nkuzi maka afọ mbụ ụmụ akwụkwọ debara aha na Memorial University dị na St. Jọn. The Faculty of Medicine nke Memorial University of Newfoundland e guzobere 1967, na mbụ ụmụ akwụkwọ na-kwetara na 1969. Ọ na-ekweta ihe 80 ụmụ akwụkwọ n'ime M.D. Mmemme n'afọ ọ bụla, na-awade M.Sc. na Ph.D. mmemme.
Mun ekwusi a campus na Harlow, England nke meghere ụmụ akwụkwọ na 1969. Nke a campus kemgbe a na-ewu ewu ebe internships na Education, na ugbu a na-enye otuto ọmụmụ, ọrụ okwu, na internships na a ọnụ ọgụgụ nke ebe. The campus accommodates odika 50 ụmụ akwụkwọ.
Memorial guzobere Institut Frecker na St. Pierre na 1973, na-enye onye na-ọkara afọ agụmakwụkwọ French imikpu mmemme. Ọ na-e chọpụtara na a ụlọ nyere site archdiocese nke St. Pierre ruo mgbe 2000. A maara ugbu a dị ka ndị Program Frecker, ọ bụ ugbu a na-agba ọsọ si FrancoForum, a asụsụ ozizi owuwu ekesịpde site na ọchịchị nke St. Pierre. Ihe omume na-nwere obere na-akwado ọchịchị nke Canada na Newfoundland na Labrador.
na September 1975 a campus e mepere Nkuku Brook; ya na nke mbụ renamed Sir Wilfred Grenfell College na 1979 na renamed ọzọ 2010 ka Grenfell Campus, Memorial University of Newfoundland. Ugbu 1300 ụmụ akwụkwọ ịga Grenfell, nke awade zuru ogo omume na ọtụtụ ọzụzụ, tinyere Fine Arts, na ele mmadụ anya n'ihu na mmemme, nke nwere ike ga-agwụ agwụ na isi campus, na ọtụtụ isiokwu ndị ọzọ.
na 1977, Ncheta University of Newfoundland Educational Television Center emejuputa ndị Telemedicine oru ngo.
na 1992, na Institute of Fisheries na Marine Technology na St. Jọn bịara mmekọ na Mun ka Fisheries na Marine Institute of Memorial University of Newfoundland. Taa, ọ na-aha ndị Marine Institute of Memorial University of Newfoundland. Ọ na-enye ma ogo ma na-abụghị ogo mmemme.
na 2008, mahadum igo usoro maka abata isi bịara n'okpuru nnyocha maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nnyonye anya site ógbè n'agụmakwụkwọ ozi, Joan Shea.
Ị chọrọ atụle Memorial University of Newfoundland ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
Memorial University of Newfoundland na Map
photos: Memorial University of Newfoundland ukara Facebook
Ọria bara uru Ama na ndị enyi gị
Memorial University of Newfoundland reviews
Jikọọ na-atụle nke Memorial University of Newfoundland.
BIKO RỤBA AMA: EducationBro Magazine na-enye gị inwe ike ịgụ Ama banyere mahadum na 96 asụsụ, ma anyị na-arịọ gị ka ị na-akwanyere ndị ọzọ so na ịhapụ ihe na English.
Ndị ọzọ na mahadum dị na Canada
University of Guelph Guelph
Polytechnique Montreal Montreal
University of Regina Regina
Dalhousie University sexton
University of Québec Montreal Montreal
University of Toronto Toronto
Education Bro bụ ọmụmụ ná mba ọzọ magazine. Anyị ga-enyere gị aka ịma ihe niile ozi ndị dị mkpa banyere agụmakwụkwọ ka elu ná mba ọzọ. Ị ga-ahụ a otutu nke bara uru Atụmatụ na ndụmọdụ, a nnukwu ọnụ ọgụgụ bara uru gbara ndị na ụmụ akwụkwọ, nkụzi na mahadum. Nọrọ na nke anyị na-achọpụta na mba niile na ha agụmakwụkwọ ụlọ ọrụ.
543 Universities 17 mba 124 Isiokwu 122.000 Students
Esi na aka
News n'oge na-adịghị
Discover mba n'oge na-adịghị
Discover ọrụ n'oge na-adịghị
Ajụjụ Ọnụ n'oge na-adịghị
Tee now ụlọ ọrụ n'oge na-adịghị
2016 EducationBro - Study Abroad Magazine. Ikike niile echekwabara.
amụma nzuzo|n'Ịntanet Okwu & disclosures